Global Aawaj | » पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाबाट कुन देशमा कतिको मृत्यु ? पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाबाट कुन देशमा कतिको मृत्यु ? – Global Aawaj
काठमाडौ । विश्वभर महामारीको रुप लिएको कोरोनाभाइरस तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ ।
छोटो समयमै ठुलो रुप लिएको कोरोनाबाट अहिलेसम्म ३ करोड ५१ लाख २२ हजार संक्रमित भैसकेका छन् । यस्तै, १० लाख ३७ हजार ५ सय २४ जनाको मृत्यु भैसकेको छ ।
वर्ल्डोमिटरका अनुसार २ करोड ६१ लाख १७ हजार उपचारपछि निको भएका छन् । विश्वको २१६ देशमा फैलिएको कोरोनाबाट थोरै देश मात्र यसबाट बच्न सकेका छन् । यस भाइरस गत डिसेम्बर चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको बताइन्छ । त्यसपछि इटली, स्पेन हुँदै अहिले अमेरिका, ब्राजिल र भारतलाई इपिसेन्टर बनाएको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा कोरोनाबाट ब्राजिल र भारतमा मृत्युदर उच्च रहेको छ भने संक्रमितदर पनि उच्च रहेको छ । कोरोनाबाट पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार ७ सय ९१ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ लाख ९४ हजार नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । यो आइतबार बिहानसम्मको अपडेट हो ।
साउदी अरेबिया -२७
दक्षिण अफ्रिका -२९
डोमोसियन रिपब्लिक- ११
कोस्टा रिका -२०
एल साल्भाडोर -४
दक्षिण कोरिया- ४